LAHATSARY: Famoretan’ny Polisy Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Tamin’ny 1 Mey · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2013 16:31 GMT
Olo-tsotra 25 sy polisy 22 no naratra nandritra ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny polisy Tiorka sy ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny 1 Mey tao Istanbul, lehilahy iray no voalaza fa jamba ny masony ilany satria tratran'ny baomba mandatsa-dranomaso ary tovovavy iray 17 taona kosa naratra teo amin'ny lohany ka nahatonga azy tsy nahatsiaro tena nandritra ny fotoana maharitra.
Vahoaka an'arivony no tonga nanao fihetsiketsehana tao an-tanàn-dehibe, kianjan'i Taksim tamin'ny 1 Mey 2013, toera-manatantara nitifiran'ireo lehilahy mitam-piadiana ireo vahoaka marobe nandritra ny Fihetsiketsehana 1 Mey tamin'ny taona 1977, izay namoizan'ain'olona 42. Tamin'ity taona ity, voaràran'ny governemanta izay fihetsiketsehana sy fankalazana ny Andro Irasaim-pirenena ho an'ny Mpiasa atao ao amin'ny kianja, ho fiarovana ny fanamboarana izay atao ao akaikin'ny faritra.
Nitifitra tafondro-drano sy baomba mandatsa-dranomaso ny polisy mba hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana izay namaly tamin'ny alalan'ny tora-bato sy “cocktail Molotov”. Mpanao fihetsiketehana 62 no voasambotra tamin'izany.
Voatsikera mafy ny toe-draharaha. Nilaza tamin'ny mpanao gazety ny lehiben'ny antoko mpanohitra Tiorka Gürsel Tekin fa tonga hatrany an-tranon'olona, hopitaly sy tany anaty fiara mpitondra marary (ambulance) ny tifitra baomba mandatsa-dranomaso nataon'ny polisy.
Hürriyet, gazety Tiorka, namoaka lahatsary [tr] tao amin'ny habakany, izay ahitana ny herisetra ataon'ireo polisy amin'ireo mpanao fihetsiketsehana:
Na dia izany aza, niampanga ireo mpanao fihetsiketsehana ny manampahefan'ny governemanta fa mpikambana amin'ny vondrona mpanakorontana izy ireo, izay nitora-bato sy “cocktail Molotov” tamin'ireo polisy, ka nahatonga ity farany nitifitra baomba mandatsa-dranomaso ho setrin'izany. Hurriyet [tr], gazety Tiorka nizara ny sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana sasany nanafika ireo mpitandro ny filaminana :
Araka ny filazan'ny nationalturk.com, nizara be ihany ny hevitra momba ireo mpanao fihetsiketsehana, misy ny olona sasany tsy mankasitraka ny fanimban-javatra sy fanafihana ireo polisy, ary ny sasany nitabataba tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana hoe “miàla any, tsy mandray anareo izahay”.
Tao amin'ny Twitter, tezitra tamin'ireo mpanao fihetsihetsehana i Murathan Ceylan (@MurathanCyln):
Inona no tanjonareo, ny hankalaza ny 1 Mey sa hitora-bato sy Molotov amin'ireo polisy sy magazay?
Mpanao gazety Serdar Arseven (@sarseven) nitsikera toy izao:
Ianareo vahoaka tsy mendrika. Namono ireo polisy izay niezaka niaro azy izy ireo! Adala!
Voatifitry ny baomba mandatsa-dranomaso i Dilan Alp [tr], mpanao fihetsiketsehana 17 taona ary tsy nahatsiaro tena nandritra ny fotoana maharitra. Efa nifoha izy izao ary efa mihatsara ny toe-pahasalamany.
Na dia nilaza aza ny sampan'ny polisy [en] tamin'ny fanambarany fa nianjera tamin'ny tohatra no nahavoa ity tovovavy ity, ary antsoin'ny governoran'i Istanbul, Hüseyin Avni Mutlu, ho mpiara-dia sy mpikambana amin'ny vondrona “marzinaly” i Alp, tantara mifanohitra amin'izany kosa no asehon'ny lahatsary nandritra ny fifandonana. Ity lahatsary [tr] nandritra izany:
Ireo fihetseham-po tao amin'ny media sosialy manoloana ny ratra nahazo azy.
Mpisera Twitter Berxwedan Yaruk (@BerxwedanYARUK) nitsikera am-piesoesoana ny zava-nitranga:
Voatifitry ny baomba mandatsa-dranomaso i Dilan Alp, mpianatra amin'ny sekoly ambony. Eny, mpiasa izy sa tsia? Te hamonjy ny fihetsiketsehana tao Taksim fotsiny izy. Koa rariny raha voavono izy.
Nitsidika an'i Alp tany amin'ny hopitaly i Sebahat Tuncel (@tuncelsebahat) ao amin'ny Antokon'ny Filaminana sy ny Demokrasia (BDP) kongresim-behivavy. Nilaza izy fa mpiasan'ny orinasa afakaba “Hey Textile” teo aloha ny rain'ity tovovavy ity, orinasa lehibe tsy nihodina intsony tamin'ity taona ity ary nanao fitokonana [tr] ireo mpiasa taloha tao:
Nisy taolana tapaka tao amin'ny loha sy saokan'i Dilan, vokatry ny baomba mandatsa-dranomaso nahavoa ny lohany. Mpiasa tao amin'ny ey Textile ny rainy. Tonga hankalaza ny fetin'ny mpiasa niaraka tamin'ny rainy izy.
Mpisera Twitter Hukukcu Themisler (@themisler) miampanga ny governemanta lasa miaro kokoa ny tetikasa eo am-pananganana fanorenana eo amin'ny kianja Taksim fa tsy ny vahoakany:
Ny Governemanta, amin'ny polisy 40.000, no miaro tsy hahavoakitikitika ny kianja Taksim, tamin'ny fanafihana ny mpiasa tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso sy kibay; naratra mafy i Dilan Alp.
Fa ho fanoherana ny hetsika manohitra ny nataon'ny polisy, namoaka sary naderadera ho Dilan Alp [tr] lazaina fa nitazona cocktail molotov teny an-tanany ny governoran'ny polisy. Nambarany fa tsy afa-tsiny ilay tovovavy ary naratra nandritra ny fotoana namelezany ny polisy.
Tsy i Alp ihany no naratra. Naratra mafy sy nampidirina hopitaly ny mpanao fihetsiketsehana Meral Dönmez, Zafer Yolcu, İbrahim Akal, ary Serdal Gül [tr].
Yolcu moa voan'ny kapoaka niaty baomba mandatsa-dranomaso, izay nahavaky ny lohany, araka ny tatitra maro. Very ny mason'i Akal iray ary ahiana koa ny tsy hahitan'ny masony iray hafa, araka ny fanambaran'ny rahalahiny Umut Akal [tr].
Ny mpisera Twitter Ali Fırat (@partizan72_) nizara ny sarin'i Yolcu tany amin'ny hopitaly:
Tsy afa-manakana ny mpiasan'i Istabul ny fandrarana ataon'ny antokon'ny mpitondra Rariny sy Fampandrosoana. ZAFER YOLCU pic.twitter.com/TuYlGjgA72
Nilaza ny fahatezerany manoloana ny faharatran'i Akal ny mpisera iray hafa Esra Aksu Gök (@ESRAAKSU12):
Misy sandany ho amin'izany ve? Lasa tsy mahita ny mason'i İbrahim Akal tamin'ny 1 May.
Nitsikera tamin'ny tarehy ratsy ny tafiky ny fitondrana tamin'ny namelezana an'i Akal ny mpisolovava Efkan Bolaç (@efkanbolac):
@efkanbolac Mendrika ny omena fisaorana tokoa ry zalahy! Jamba ny mason'i İbrahim Akal ilany noho ny baomba mandatsa-dranomaso. Lasa nisaotra azy ireo izy rehefa nivoaka ny hopitaly!
Ny mpisera Twitter Dilan Alatas (@DilanAlatas), nanonona an'i Gül raha niantsanantsam-bava an'i Alp, ilay mpanao fihetsiketsehana 17 taona, noho izy tao amin'ny fihetsiketsehana nefa tsy mpiasa:
@DilanAlatas Taorian'i Dilan Alp, nalefa tany amin'ny efi-pandidiana ny mpiasa Serdal Gül. hilaza ve ianao hoe “tsy mpiasa izy izany”?
Nanonona an'i Gül ihany koa ny mpisera Twitter Astrig Daghlian (@Keghetsi):
Tsy mahatsiaro tena ihany koa i Serdal Gül, hoy ny fianakaviany: “Tsara kinendry ny zanakay ary naratra hatreo amin'ny lohany”